/blog/gallery/Kedu ka Flibanserin si enyere nwanyị aka dị ka Hormone Mmekọahụ
Ihe na 11 / 11 / 2019 by Dr. Patrick Young dere na gallery.
Ekwenyere na mmekorita nwoke na nwanyi bu ihe zuru oke n’etiti ndi nwoke, na ndi nwere chi agha; enwere nhọrọ nhọrọ ọgwụgwọ ịhọrọ site na ha niile site na Viagra, Cialis, na ọgwụ ọjọọ ED. Ha nwekwara ọgwụgwọ homonụ iji nyere aka weghachite mmekọahụ ha. Feelmụ nwanyị nwere mmetụta dị iche iche na nke a. Ọ dabara nke ọma, ha nwekwara nhọrọ. Ha agaghịzi na-enwe agụụ mmekọahụ furu efu, nsogbu nke butere ọtụtụ mmekọrịta alụkwaghịm. Na Flibanserin (167933-07-5), ha nwere uzo iji bulie mmasị mmekọahụ.
Gịnị bụ Flibanserin
Flibanserin (167933-07-5), nke a na-ere n'okpuru aha Addyi bụ ogwu eji eme ihe maka ọgwụgwọ nke nsogbu ụmụ nwanyị premenopausal, ọkachasị ndị nwere nsogbu agụụ mmekọahụ hypoactive. Kedu ụdị agụụ mmekọahụ hypoactive ị na-ajụ? Nke a bụ ọnọdụ e ji enwe agụụ mmekọahụ dị ala, nke nwere ike ibute nsogbu na nsogbu n'etiti onwe onye. Nsogbu a ekwesịghị ịbụ n'ihi ibikọ ọnụ nsogbu ahụike ma ọ bụ nsogbu mmekọrịta. Ozo, obughi isi okwu abia site na ogwu ma obu iji ihe ogwu eme ihe.
Shouldkwesịrị ịmara nke ahụ Flibanserin egosighi maka ụmụ nwanyị ndị rurula nsọ. Ọzọkwa, adabaghị maka ụmụ nwoke. A na-enye ọgwụ a n'okpuru mmemme pụrụ iche, nke pụtara na a ga-edebanye aha ya na mmemme a tupu ị nweta ọgwụ ahụ. Ihe omume a na - enyere ndi oru aka imuta uru na ọghọm dị na iji ọgwụ a, n'ụzọ dị otu a, ha nwere ike ịme mkpebi dị mma ma ọ dabara na ha ma ọ bụ na ọ daba. Ọzọkwa, ndị ọrụ kwesịrị ịrịba ama na ọgwụ a agaghị eji dị ka onye nkwalite arụmọrụ mmekọahụ. Kama, ọ bụ inyere ndị nwere agụụ mmekọahụ belata aka n'enweghị nsogbu ọ bụla.
Kedu ka Flibanserin si arụ ọrụ maka ụmụ nwanyị?
Ọtụtụ ụmụ nwanyị nwere obi abụọ maka iji ngwaahịa a, ha ejighị n'aka ma ha kwesịrị iji ya. Ihe kpatara ya bụ, ha na-atụ ụjọ na ọ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ. Eziokwu bụ, n’agbanyeghi na ngwaahịa a na-arụ ọrụ, ọ naghị arụ ọrụ maka mmadụ niile. Onye ọ bụla na-eme ya n'ụzọ dị iche, na maka na ọ rụrụ ọrụ maka onye ọzọ apụtaghị na ọ ga-arụkwa otu ọrụ ahụ. Agbanyeghị, 60% nke ndị jiri ọgwụ a nyere nyocha dị mma ma kọọ na ọgwụ ahụ nyere nsonaazụ dị mma.
Ma, ajụjụ bụ isi; kedu ka o si arụ ọrụ? Enwebeghị nchọpụta doro anya gbasara usoro ọgwụ a si arụpụta nsonaazụ. N’agbanyeghi, ndi nyocha achoputara ihe omuma, na-agbaso na eziokwu a bu nke serotonin maka igbochi oru mmekorita nwoke na nwanyi, ha ahutawo na Flibanserin (167933-07-5) na-ebelata ọrụ serotonin na ụbụrụ. Nke a, n’onwe ya, na-eweghachi agụụ mmekọahụ nke nwanyị ahụ. Ọzọkwa, ọgwụ ahụ nwere ụfọdụ mmetụta na-adịghị ala ala na norepinephrine na dopamine, nke ejikọrọ na agụụ mmekọahụ enwekwukwa.
N'adịghị ka Viagra na ọgwụ ndị ọzọ metụtara nwoke, ọgwụ a na-arụ ọrụ n'ụzọ kachasị site na ịka ụbụrụ. Ọ na - eme ya site na ịbawanye ọkwa nke neurotransmitters nke ụbụrụ gị na - eji kpalie agụụ mmekọahụ.
N'ozuzu, ọgwụ ahụ na-akwatu bọtịnụ ụbụrụ abụọ bụ isi dị mkpa maka ịkwalite agụụ mmekọahụ mgbe ị na-egbochi ndị ọrịa na-ahụ maka igbochi mmasị mmekọahụ na ụmụ nwanyị. Eweputara ọgwụ a na ahịa azụ na 2015 mgbe FDA kwadoro ya maka ọgwụgwọ nke enweta HSDD na ụmụ nwanyị.
Ọ bụ ezie na enweghị ozi doro anya banyere ụdị ụmụ nwanyị nwere ike irite uru na ọgwụ a, ọ dị mma ịsị na a na-eji ọgwụ ahụ agwọ ọrịa agụụ mmekọahụ sitere n'okike. Nke a pụtara na ọ na-arụ ọrụ naanị ma ọ bụrụ na enweghị ego dị oke maka ọdịmma agụụ mmekọahụ furu efu, dị ka enweghị mmasị na mmekọrịta ahụ ma ọ bụ n'ihi mmetụta ọgwụ ndị ọzọ. Ọzọkwa, ọ bụghị maka ndị na - ahụkarị nsogbu ịhụ nsọ. A nwalere ọgwụ ahụ na ụmụ nwanyị nwere HSDD. Themụ nwanyị ahụ nwere mmekọrịta kwụsiri ike ruo ogologo oge, nke pụtara na nsogbu ha abụghị n'ihi mmekọrịta na-enweghị obi ụtọ. Ha nwere agụụ mmekọahụ n'oge gara aga ma na-echegbu onwe ha na ha ji nwayọọ nwayọọ funahụ ya ma na-achọ ụzọ ha ga-esi nweta ya.
Womenmụnwanyị ndị a enwetala nsogbu a ihe dị ka afọ ise, ha kwukwara na ha enweghị agụụ mmekọahụ maka ndị ha na ha hụrụ n'anya ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ. Ihe dị ka 50-60% nke ụmụ nwanyị nabatara ọgwụ ahụ nke ọma, ebe ndị ọzọ mere ihe na-adịghị mma. Gotfọdụ nwere agụụ mmekọahụ maka ndị ọzọ karịa ndị ibe ha, yabụ enweghị ozi doro anya gbasara ahụ gị ga-esi zaa ọgwụ ọgwụ.
Ajụjụ ọzọ a na-ajụkarị n'okpuru otú ọgwụ si arụ ọrụ bụ ogologo oge ọ ga-ewe iji hụ nsonaazụ. Ọzọkwa, akụkụ a nwere ike ịdị iche na otu onye na nke ọzọ, ọkachasị n'ihi na ọ na-emeghachi omume n'ụzọ dị iche. Agbanyeghị, ikpe ndị ahụ na-atụ aro na ọ ga-ewe izu anọ iji hụ nsonaazụ mbụ yana ruo izu iri na abụọ maka nsonaazụ kachasị. Mana, ịchọrọ iji ya nke ọma ka ị hụ nsonaazụ ya.
Usoro ọgwụgwọ Flibanserin
Usoro ọgwụgwọ ndị ọkachamara tụrụ aro ya bụ 100mg, nke ekwesịrị ịbara ya ọnụ, otu ugboro kwa ụbọchị. Ọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ejiri ya n'oge akwa ụra ma ọ bụ oge izu ike. Nke a bụ n'ihi ị takingụ ọgwụ a n'oge oge ọrụ ma ọ bụ mgbe ahụ gị nọ n'ọrụ na-etinye gị n'ihe egwu nke ịmalite nrụpụta syncope, nkụda mmụọ nke etiti, hypotension, ma ọ bụ ị nwere ike ịbanye n'ihe ọghọm.
Gịnị ga-eme ma ọ bụrụ na ị na-atụ uche ị aụ ọgwụ?
Ọ bụrụ na uche gị Flibanserin usoro onunu ogwu n’oge ihi ura, o bu ihe odi nma ka ichere ruo oge ozo di ura iji nye ogwu.
ADDYI riri nne
Singụbiga ọgwụ a ókè apụtaghị na ị ga-enweta nsonaazụ ngwa ngwa. Kama, ọ ga-ewetara gị nsonaazụ azụ. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ma ọ bụrụ na ị accidentụbiga mmanya ókè na mberede ma ọ bụ chee na ị mere ya, chọọ ọgwụgwọ ozugbo.
Kedu mgbe ị ga-akwụsị iji ya?
Youkwusi ịkwụsị iji ọgwụ a ka izu ụka asatọ gachara eji enweghị mgbakwunye ọ bụla. Dịka e kwuru na mbụ, ọgwụ na-arụ ọrụ dị iche iche na ndị dị iche iche. Fọdụ nwere ike ịmalite ịhụ nsonaazụ ozugbo, ebe ụfọdụ nwere ike iwe oge. Agbanyeghị, ọ gaghị ewe gị karịa izu asatọ iji nwetụ obere nkwalite. Ọ bụrụ na nke ahụ mere, ọ na - egosi na ngwaahịa adịghị mma maka gị, ọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ị kwụsị iji ya.
Mgbanwe usoro onunu ogwu
Dabere na onodu uzo, ị nwere ike gbanwee usoro onunu ogwu gị ka ọ bụrụ nke agafeghị oke ma ọ bụ sie ike dabere na ndị na-egbochi CYP3A4. Enwere ike ikwu na ọ bụrụ na ị na-ewebata ojiji Flibanserin dabere na oke ma ọ bụ sie ike CYP3A4 inhibitor, mgbe ahụ ịkwesịrị ịmalite mgbe ihe dị ka izu abụọ site na usoro ọgwụgwọ ikpeazụ nke CYP3A4 inhibitor. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe ihe mgbochi CYP3A4 dị ka otu FLIBANSERI si jiri ya, ịkwesịrị ime ya ụbọchị abụọ mgbe usoro Flibanserin gara aga.
Ntụle usoro onunu ogwu
Shouldkwesịrị ịmara na ọgwụ a dị mma maka ndị nwere HSSD, nke pụtara na okwu a na-adakwasị ndị na-enweghị nsogbu ahụike ọ bụla. Ọzọkwa, nsogbu ahụ ekwesịghị ịbụ n'ihi ihe ndị ọzọ ma ọ bụ n'ihi menopause. Y’oburu na enwere HSDD n’agbanyeghi onodu ya, onye ibe gi ma obu ihe na - akwalite gi, ya mere ihe a bu ihe diri gi. Y’oburu n’inweghi mmekorita nke inwe mmeko nwoke ma obu nwanyi n’ihi na obi tara gi mmiri, o na aruru oru, ma obu na gi na onye gi na ya no, ogwu a abughi ihe ichoro idozi nsogbu gi. Ezubere ya maka ịkwalite arụmọrụ mmekọahụ, mana, ọ bụ maka ịkpalite homonụ mmekọahụ. Ọzọkwa, ọ bụghị ndị mmadụ ga-eji ya.
Kedu ihe mmetụta dị na iji Flibanserin?
Ihe ọ bụla bara uru nwekwara ụfọdụ mmetụta ọ na-enwe. Isi Uru nke Flibanserin bụ na ọ na - enye nkwalite mmeba na draịvụ iko. Ọ na - arụ ọrụ zuru oke dị ka ọgwụgwọ HSDD na ma nyocha sayensị na nyocha anecdotal na-egosi na ọ na - ebute mmụba na mmasị mmekọahụ. Agbanyeghị, ọgwụ a anaghị arụ ọrụ oge niile, ịkwesịrị iji echiche ghere oghe. Achọghị ọgwụ a maka ọgwụgwọ nke agụụ mmekọahụ na-efu n'ihi ọgwụ dị adị ma ọ bụ ahụike ọzọ ma ọ bụ adịghị ike anụ ahụ. Ọzọkwa, ọ gaghị aba uru ma ọ bụrụ na ị na-eji ọgwụ ndị ọzọ ugbu a nwere ike imetụta agụụ mmekọahụ gị, dị ka ọgwụ na-agwọ ọrịa. Ikwesiri ikwe ka dọkịta gị lelee gị nke mbụ iji chọpụta ma ị dabara adaba iji ọgwụ ahụ ma ọ ga-abara gị uru.
Kwesighi iji ọgwụ a ma ọ bụrụ na ịnwe nsogbu ahụike ọ bụla dị ka ọrịa obi, ọbara mgbali, ma ọ bụ ọrịa shuga. Ikwesiri ikwe ka dibia bekee nyere gi aka idozi nsogbu a tupu i theue ogwu.
Tupu nkwenye maka ojiji, FDA gha enyocha ọgwụ iji chọpụta ma ọ bụrụ na ọ nweghị ihe ọ bụla maka iji ya. Agbanyeghị, ADDYI n'etiti ọgwụ ndị ahụ na-ekpebisibeghi ike ma ha ejighi nchekwa. Ogwu a gosipụtara bara ezigbo uru n'ịba ụba Libido ma nyere ụmụ nwanyị ahụ nwere agụụ mmekọahụ furu efu. Achọpụtala ya nwere ọtụtụ uru yana dịka nnukwu nchekwa nchekwa. Agbanyeghị, FDA chọpụtara na ọgwụ ahụ na-enwe ụfọdụ mmetụta dị n'akụkụ ọ bụla, ha niile bụ ọgbụgbọ, ura, na ọgbụgbọ. Ihe ndị ahụ bụ Mmetụta akụkụ Flibanserin, mana FDA nwere nchegbu banyere mmetụta abụọ dị egwu ndị mmadụ kwesịrị ichegbu onwe ha bụ;
Ọ bụrụ na ejiri ya mee ihe n'ụzọ na-ezighị ezi, ọgwụ a nwere ọgwụ mgbochi, ụfọdụ ndị mmadụ na-ejikwa ya maka ebumnuche na-ezighi ezi ka ha na-anwa inwe udo na ụra dị mma. Ọ bụrụ na nke a mere, ndị ọrụ ji ụra karịa ọtụtụ awa karịa ka ha kwesịrị. Nke a, n’aka nke ya, na-emetụta arụpụtaghị ihe ha bụ n’ihi enweghị itinye uche na ura n’oge awa adịghị mma.
Ainda mba n'ihi mgbali ọbara
Nke a bụ nsonaazụ kachasị njọ, ọ na - abụkarịkwa mgbe ejiri ọgwụ ahụ n'oge adịghị mma. Dịka anyị kwurula, ekwesịrị iji ọgwụ ahụ mee ihe n’oge ụra ma ọ bụ izu ike. Ijikwa ọgwụ ahụ mgbe ị na-eteta ụra ma ọ bụ mgbe ahụ gị na-arụ ọrụ na-ebute ọbara mgbali elu ma nwee ike ime ka ahụ gwụ gị.
G AREN ARE B WAR EGO NA-EGWU Flibanserin?
Ra .ụbiga mmanya ókè
Mgbe ị withụ mmanya, ọgwụ a nwere ike ibute oke ọbara ọgbụgba, nke na-ebute oke onwu, ike ọgwụgwụ, na ịda mba, ị ga-enwekwa ike ịda mbà n'ihi nsonaazụ ndị a. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ozugbo ị malitere iji Flibanserin, ị ga-akwụsị ị alcoholụ mmanya. Ọbụnadị ntakịrị mmanya na-egbu egbu nwere ike ibute nsonaazụ ndị a kpọtụrụ aha.
Ejiri ya ma ọ bụ ike CYP3A4 inhibitors
Ọ bụrụ na ejiri YP3A4 inhibitors YPXNUMXAXNUMX siri ike, ọ nwere ike ị ga-enweta ntinye uche nke Flibanserin, nke ga-adị ka ị overụbiga mmanya ókè. Nke a, n’onwe gị, ga - eme ka ị nweta mmetụta dị n ’ịdoụbiga ihe a ókè. Na nke a, ị ga-arịba ama na ojiji nke ndị a inhibitors a contraindicated, nke pụtara na ị ga-eji ya naanị ma ọ bụrụ na ọnọdụ na-amanye ya.
Contraindicated na ndị ọrịa nwere imeju adịghị iket
Ọgwụ agaghị adaba maka ndị nwere nsogbu oruru imeju belụsọ na enyemaka nke ọkachamara ahụike. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịchọ onye dibịa ga-enyere gị aka ijikwa nsogbu imeju gị tupu ịmalite ị ofụ ọgwụ a. Nnyocha e mere gosiri na Flibanserin (167933-07-5) mụbara ekpughere ndị nwere nsogbu imeju ma e jiri ya tụnyere ndị nwere ọrịa imeju na-arụ ọrụ, nke kpughere ha n'ihe ize ndụ nke ibute syncope, hypotension, na Central system system depression.
Ime na lactation
Onweghi ihe omumu ihe omimi n’egosiputa ma ngwa ahia a etinye ndi nwanyi di ime ma obu ndi na-enye ndi ozo. Dika nyocha emere umu anumanu, o gosiputara na ihe ojoo na-adi na onodu onuma nke nne. Offọdụ mmetụta ndị a na-enwe n’oge dị ka iribiga ibu, ihi ụra, na nkụda mmụọ. Animalsmụ anụmanụ na-ehi ụra karịa ka ọ na-adị. Offọdụ n'ime anụmanụ ndị ahụ nwere mmetụta ịmụ nwa na uto, gụnyere mgbakwunye ihe owuwu yana ibelata ibu.
A ga-ekpebi ma ọ bụrụ na Flibanserin ntụ ntụ (167933-07-5) nwere mmetụta ọ bụla na nkesa mmiri ara ụmụ mmadụ, amabeghị ya ma ọ nwere mmetụta ọ bụla na ụmụ a na-enye nwa ara. Mmụta emere emere banyere oke gosiri na ọgwụ ahụ dị na mmiri ara ehi. Site na nke a, ọ dị mma ịsị na iji Flibanserin mgbe ọ dị ime ma ọ bụ na-a breastụ ara nwere ike ịdakwasị ụmụ nwanyị na-enye nwa ara dịka ịla ahụ, nke a nwekwara ike imetụta ụmụ aka na-a breastụ ara.
Flibanserin nwere ike ifelata
Dabere na ọtụtụ ọmụmụ na nyocha hoc, postmenopausal na ụmụ nwanyị premenopausal nke jiri ọgwụ a maka hypoactive Mmekọahụ ochicho nsogbu nwere ike ifelata. Ka anyi che ya iru. Ọtụtụ ụmụ nwanyị maara banyere ibu ha ma na-atụ egwu iji ihe ọ bụla nke ga-emetụta ibu ha n'ụzọ dị njọ. Ọ bụ ụdị mmesi obi ike ịmara na iji FLIBASERIN anaghị enwe mmetụta ọ bụla na-emetụta mmadụ, mana, ọ na-enyere ha aka iwete nnukwu ibu. Ọ bụrụ na ị na-alụ ọgụ maka nsogbu ibu ma na-achọ ụzọ ọ bụla na-enweghị ike isi wụfuo ya, ọgwụ a bụ mgbakwunye.
Emere nyocha banyere nke a iji mesighachi ụmụ nwanyị obi, mana ha dị nchebe ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ha na-achọ ị takeụ ọgwụ. A maara ọtụtụ ọgwụ mgbochi na-akpata ibu na-abawanye, ụmụ nwanyị na-atụkwa egwu na ọgwụgwọ a ga-enwe mmetụta yiri ya.
Ihe si na nsogbu a pụta na ọgwụ a bụ obere ihe 5-HT2C na-anabata 5-HT2C agonist jikọtara ya na ịbelata ibu, ebe FDA kwadoro ya maka nke a na eziokwu na Flibanserin dị obere nyere ụmụ nwanyị nghọta na ọ ga-akpata. ha ka ha nweta oke ibu.
Naanị otu ị ga - esi nweta nsonaazụ kacha mma bụ ma ọ bụrụ zụta Flibanserin sitere na onye na-ere ere tụkwasịrị obi. Site na mmụba dị ukwuu maka ngwaahịa a, enweela ịrị elu nke ndị na-ebubata ihe na-ekwu na ha na-enye àgwà kacha mma nke Flibanserin. Ọ bụ ezie na ụfọdụ nwere mmasị kachasị gị n'obi, ụfọdụ bụ naanị mgbe ha gbasasịrị ndị na-azụ ahịa aghụghọ. Wantchọrọ ijide n'aka na ị nwetara ngwaahịa sitere n’aka onye na-eweta ya ị ga-atụkwasị obi. Can nwere ike ịnweta Flibanserin ntụ ntụ Ebe ị ga - edozi ụzọ tupu ị na - ede ya ọnụ. Wepụta oge gị, mee nyocha nke ọma iji chọta nke ziri ezi Flibanserin maka ọrịre. Ọgwụ bụ ngwaahịa na-egosi mmerụ ahụ, ịnweta nke na-adịghị mma nwere ike ime ka ọnọdụ gị ka njọ karịa ka ọ dị ugbu a.
Flibanserin egosiwo na ọ bụ ezigbo ihe ngwọta nye ụmụ nwanyị ndị agụụ mmekọahụ na-enwe na-enweghị isi. Agbanyeghị, ị ga - enweta ogo kacha mma nke ngwaahịa a ma jiri ya mee ihe kwesịrị ekwesị iji hụ nsonaazụ ahụ. Ọzọkwa, ịkwesịrị iji obi ghere oghe ma rịba ama na ọ nwere ike ọ gaghị abara gị uru yana ọ rụkwara onye ọzọ ọrụ. Echefula inweta ndụmọdụ nke dibịa tupu ịmalite iji ya iji chọpụta ma ị bụ ezigbo onye tozuru etozu.
Jane McCall, Nwanyị Viagra Flibanserin: Ntuziaka zuru ezu banyere ọgwụgwọ Ọrịa agụụ mmekọahụ agụụ mmekọahụ (HSDD) na ịba ụba nke Libido nwanyị iji nweta Orgasm nke ukwuu ma kpochapụ Obi Nsogbu; 1724181459
Amazon Digital Services LLC - Kdp Biputere Anyị, 2018, Pink Viagra (Flibanserin): Akwụkwọ Ntuziaka na Mkpụrụ Mmepe Mmekọahụ Mmekọahụ nke na-eme ka ọ gbaa Mmekọahụ ma na-enyere Amụ nwanyị Aka Inweta Otutu Ọfụma, 1729471161
Borsini F, Evans K, Jason K, Rohde F, Alexander B, Pollentier S (2002). “Ogwu ogwu flibanserin”. Nyocha CNS Ọgwụ. 8 (2): 117 – 42.
The Best Nootropics Aniracetam Powder for Enhancement Enhancement
Ihe ọ bụla gbasara Oxandrolone (Anavar), ịkwesịrị ịma	Kedu otu Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) si arụ ọrụ maka ndị na-ahụ maka ahụ